रोङ्गो हस्पिटलमा नक्कली डाक्टर - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचाररोङ्गो हस्पिटलमा नक्कली डाक्टर
रोङ्गोमा निर्देशकले नियुक्त गरेका डाक्टर एमबीबीएस होइनन्। उनी आरएमपी सर्टिफिकेट (रेजिस्टर मेडिकल प्राक्टिसनर) धारक मात्र हन्। भारतको कुनै पनि अस्पतालमा एमबीबीएसको साटो आरएमपी सर्टिफिटेक धारकलाई डाक्टर बनाएर पठाउनु भनेको हत्यारा पठाउनुसरह हो। जसले डाक्टरी ज्ञान नै लिएका छैनन्, उसले कसरी रोगीहरूको जाँच गर्लान् त?
कालेबुङ,2जुलाई
धेरैवर्षदेखि रोङ्गो सिन्कोना बगानमा डाक्टर थिएनन्। तर हिजैमात्र एकजना डाक्टरले रोङ्गो अस्पतालमा जोइन् गरे। उनी हुन्- कास्येम निवासी रबीन राई। जोइन गर्दै उनले अस्पतालपक्षसित कुराकानी पनि गरे। अबोप्रान्त मिलेर काम गर्ने सरसल्लाह पनि गरे।
उनले जोइन गर्ने वित्तिकै खबरम्यागजिनलाई एउटा सूत्रले बताए, सिन्कोना बगानका निर्देशक डा. सामुएल राईले जुन डाक्टर रोङ्गो अस्पतालमा नियुक्ति दिएका छन्, उनी नक्कली हुन्। स्मरणीय छ, नियुक्ति गर्न अघि पदको लागि परीक्षा वा अन्तरवार्ता लिइन्छ, त्यसबाट छिरेपछि नै नियुक्ति पत्र थमाइन्छ।
रबीन राईलाई कसरी नियुक्ति दिइयो? यो पाटो निक्कै चासोलाग्दो छ। यो नियुक्तिबाट भ्रष्टाचारको शङ्कासम्म मिलेको छ।
खबरम्यागजिनले खोजी गर्दा फेला पऱ्यो, रोङ्गोमा निर्देशकले नियुक्त गरेका डाक्टर एमबीबीएस होइनन्। उनी आरएमपी सर्टिफिकेट (रेजिस्टर मेडिकल प्राक्टिसनर) धारक मात्र हन्। भारतको कुनै पनि अस्पतालमा एमबीबीएसको साटो आरएमपी सर्टिफिटेक धारकलाई डाक्टर बनाएर पठाउनु भनेको हत्यारा पठाउनुसरह हो। जसले डाक्टरी ज्ञान नै लिएका छैनन्, उसले कसरी रोगीहरूको जाँच गर्लान् त?
खबरम्यागजिनले पाएको जानकारी अनुसार आरएमपी सर्टिफिकेट केही पैसा तिरेपछि जसले पनि पाँचघन्टामा नै प्राप्त गर्न सक्छन्। तर रबीन राईले जहाँबाट आरएमपी सर्टिफिकेट ल्याएका छन्, त्यस संस्थानको कुनै पनि वैध मेडिकल निकायसित आवद्धता छैन।
जब रबीन राई नक्कली डाक्टर रहेको हल्ला फैलियो, निर्देशकले नियुक्तिपत्र खारेज गरेर कागजपत्र जाँच गर्न बोलाइएकोसम्म जानकारी पाइएको छ। रबीन राई, डा. सामुएल राई अनि रोङ्गो सह व्यवस्थापक प्रीतम गौरलाई बारम्बार फोनमा सम्पर्क गर्न खोजिएपनि सबैको फोन बन्द पाइएकोले धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सकिएको छैन।
बन्द खोल्ने नखोल्नेबारे निर्णय गर्ने दायित्व मोर्चाको हो- विमल गुरूङ (19,192)